isitayile nobuhle | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: isitayela nobuhle
Uyicoca njani ipendenti yegolide- iindlela ezi-6
ezaposwa ngomhla 03.10.2019 03.10.2019
Igolide sisinyithi esihle esinexabiso eliphezulu, kodwa ngokuhamba kwexesha inokuphulukana nokukhanya kwayo koqobo kunye nokukhanya. Ubucwebe begolide - imihlobiso ecwangcisiweyo kunye nezinto ezihonjisiweyo - ziba mdaka kwaye zingcolisiwe, zigutyungelwe ngogcobo olunamafutha. Them…
IHoodies yabasetyhini: ifoto, inkcazo. Unxiba njani i-hoodie
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 22.10.2019
Igama "hoodie" asiyongcambu inye namagama athi "thin" kunye "ukunciphisa umzimba". Nangona kukhethwe ngokufanelekileyo, naziphi na iimpahla zinokuba zincinci. Ngapha koko, ivela kwi-English hood- "hood". Hoodies kwabasetyhini ...
I-Swiss watches I-Panerai: iifoto, uphononongo
UGiovanni Panerai wavula ivenkile yakhe yokuqala yokubukela eFlorence ngo-1860. Ke akalindelanga ukuba baphumelele olo thando kunye nempumelelo kungekuphela e-Itali, kodwa ...
Izihlangu ezithandwayo "Mifer", igridi enamacala avela kumenzi
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 23.10.2019
Uphawu lwentengiso lwe-Mifer lumelwe kukungafani okukhulu kwezihlangu zabantwana. Inkampani yasekwa ngo-2009. Ngalo lonke ixesha lobukho bayo, iminyaka esibhozo, uphawu lukwazile ukoyisa indawo ebalulekileyo kwimarike yaseRussia. Konke…
Izipho ze-DIY zoSuku looTitshala. Iingcamango zokuyila, iklasi yokufunda
Isiko lokuvuyisana nootitshala ngeholide yabo yobungcali sele likhona ixesha elide. Kwaye ngalo lonke ixesha abafundi kunye nabazali babo bajongana nombuzo wento abanokuyibonisa. Iintyatyambo kunye neelekese zithathwa njengesiqhelo ngabantu abaninzi ...
Izihlangu ze-Askalini. Malunga nodidi kunye nemveliso
Nawuphi na umfanekiso awunakuthathwa njengopheleleyo ukuba azikho izihlangu ezifanelekileyo. Nokuba ikwibhodi ehambelana kakuhle, inkangeleko ayizukuhambelana ukuba izihlangu okanye iibhutsi azilingani kumfanekiso uphela. ...
Iibhatyi ezisezantsi "Lamide": uphononongo, amaxabiso, iigridi ezimacala mabini
Ubusika banamhlanje phantsi kweebhatyi ziyindibanisela yobuhle kunye nokusebenziseka. Ayilolize ukuba ziye zasetyenziswa ngokuqinileyo phantse ngabo bonke abantu abanyanzelwa ukuzikhusela engqeleni. Iidyasi ezantsi "uLamide", uphononongo lwazo ...
Ivesti yabasetyhini yindlela yangoku yexesha!
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 25.10.2019
Ivesti yabasetyhini sisiqwenga esinxibayo. Nabani na onento enjalo kwikhabhathi yakhe ayinakucinga ngento yokunxiba. Ivesti yabasetyhini iyaqhubeka nokuba kwincopho yokuthandwa akusekho ...
Inethiwekhi yokuthengisa iTezenis. Ivenkile eMoscow
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 16.09.2019
Ekuqondeni kwabathengi abaninzi "iTezenis" yivenkile yangaphantsi. Ayisiyonto yempazamo eqhelekileyo. Ngapha koko "iTezenis" luphawu lwehlabathi, okuthetha ukuba kungekuphela nje iilokhwe zangaphakathi, kodwa ...
Amacici egolide ngeerubhi (ifoto)
Iinkundla, amanenekazi e-semi-world, iinkosana zegazi, ookumkani, iibhiliyoni ze-Old and New Worlds, iinkwenkwezi zase-Hollywood-bonke bathanda amatye axabisekileyo ngomnqweno: iidayimani ezingenambala kunye nebala, i-emeralds, isafire, irubhi kunye neeperile. ...
Ukuhanjiswa ngumkhenkce wezihlangu: uphononongo, amanqaku okuhamba kunye neentlobo
Ubusika bufikile, ixesha lokuhonjiswa koNyaka oMtsha, izibane zothando ezifudumeleyo, amaqhwa ekhephu awela esibhakabhakeni. Nangona kunjalo, kungekudala ibali leentsomi liya kuba lelona cala lakhe limnandi: ngenxa yokwehla kobushushu, izitrato ziyajika, zithetha ngokoqobo, ...
Idayi yeenwele ezimnyama: abavelisi, iphalethi
Kubonakala ngathi ubuhle obuneenwele ezimnyama kulula kakhulu ukuzikhathalela kunee-blondes. Idayi emnyama yonakalisa kancinci iinwele, ezigqithileyo kwiingcambu azibonakali kangako, kwaye ukukhetha umthunzi ofanelekileyo kulula kakhulu. Akunjalo…
Iindlela zokubuyiselwa kweenwele ekhaya. Olona nyango luphambili lokubuyiselwa kweenwele
Iinwele ezintle liphupha lamantombazana onke, kodwa isitayile sodwa asisoloko sanele ukufezekisa injongo. Ukugcina ii-curls zihlala zikhazimla kwaye zil-silky, zifuna ukhathalelo olufanelekileyo. Yeyiphi eyona ...
Phakathi kwamachiza amaninzi asetyenziswa kunyango lwezilwanyana, mhlawumbi enye yezona zidumileyo yikrimu yeZorka. Kutheni le nto iyeza lezilwanyana laye lathandwa naphakathi kwabantu? Okokuqala, encinci malunga ne-pharmacological yayo ...
I-mannequin yentloko yeenwele. Ungayikhetha njani efanelekileyo?
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 06.01.2020
I-mannequin yekhanda lekhanda sisixhobo sabalungisa iinwele kuwo onke amanqanaba ezakhono. Abaqalayo baya kuba nakho ukufunda kuyo, benze naziphi na iinwele, isitayile, kunye neenkosi zobugcisa babo- ukuzama nokuzisa ezintsha ngaphandle koloyiko ...
Imaski yeKeratin yeenwele: uphononongo, amaxabiso
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 22.11.2019
Abanye baphupha ngeenwele ezithe tye, ezinye - zee curls, kwaye umntu uthuthunjiswa ngumdaka "wokuyila" entloko kunye neenwele ezimbi. Uninzi mhlawumbi luvile ukuba kukho imaski yokulungisa ye-keratin ye ...
Page 1 Page 2 ... Page 282 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-55 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-4,708.